बिमलको मार्मिक गीत “दशैं आउछ किन” सार्बजनिक – Complete Nepali News Portal
बिमलको मार्मिक गीत “दशैं आउछ किन” सार्बजनिक
विजया दशमि तथा शुभ दिपावलीको अवसर मा विमल गैरेले दशै गित वजारमा ल्याएकाछ्न, अविरल फिलिम्सको प्रस्तुतिमा तयार भएको गितमा स्वंय विमल गैरे र सुशिला विश्वकर्माको आवाज रहेको छ भने शव्द स्वंय विमल गैरेको रहेकोछ जसमा लय भने विष्णु खत्रीको रहेको छ l
वि.सं. २०४९ साल मंसिर २ गते पाल्पा जिल्लाको कचल गाविसमा जन्मिएका गैरे यतिवेला सांगेतिक क्षेत्रमा अघि बढ्दै छन । जन्मस्थान पाल्पा भएपनि गैरे अहिले रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका ३ मुर्गियामा बसोबास गर्दै आएकाछन ।
विं.स. २०७२ सालमा पहिलो एल्बम स्वरुप गैरेले तिज को एल्बम “ए साईली ” दर्शक र स्रोता विच ल्याएकाथिय । यहि एल्बम बाटै गैरेले औपचारिक साङ्गीत यात्राको थालनी गरेका थिए । विभिन्न स्थानमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाए पनि गैरेले औपचारिक रुपमा एल्बम निकालेका भने थिएनन् । “ए साईली ” एल्वमबाट शुरु भएको साङ्गेतिक यात्रा २०७४ साल सम्मामा चार ओटा एल्बममा परिणत भएको छ । दुई ओटा एल्वममा गैरेले शब्द सजाएकाछ्न भने दुईओटा एल्बममा आफैले स्वर दिएकाछ्न ।
अहिलेको लोक सङ्गीत प्रतिको गैरेको धारणा यस्तो छ ।
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान कपिलवस्तुका सदस्य समेत रहेका गैरको बुझाईमा अहिलेका लोक गीत सङ्गीतमा बिकृती देखा पर्न थालेको छ । वास्तविक लोक शब्दको अर्थ नै फरक रहेको र यस शब्दबाट रचियएका सिर्जनाहरु नितान्त मौलिक खालका हुनुपर्नेमा गैरेको धारणा छ । मौलिक खालका शब्दहरुको चाख नै लोक गीत सङ्गीत हो । मेलापात, घाँस दाउरा, पानी पधेरो गर्दा गुनगुनाउन सकिने भाका नै लोक गीत रहेको उहाको भनाई छ । आफैमा सङ्गीत विभिन्न प्रकारका छन् । अध्ययनबाट पनि साङ्गेतिक करियर निर्माण गर्न सकिन्छ । ठुलै गायक बन्न सकिन्छ तर लोक गीत सङ्गीतमा त्यता तीर भन्दा पनि नेपाली समाजको वास्तविक चित्रण गर्ने खालको सिर्जना हुनुपर्नेमा गायक गैरेको जोड छ । नेपाली लोक गीत सङ्गीतको संरक्षण सम्र्बधनको लागि भन्दै राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान खोलिएको हो । तर जुन लक्ष्यको साथ प्रतिष्ठान खोलिएको हो त्यहि अनुसार काम नभएको गायक गैरेको भनाई छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा आउदा वास्तविक लोक गीत सङ्गीत जस्तै गीतहरु बजारमा आउन लागेको गैरेले बताउछन । आजै मात्रै सार्बजनिक भएको दशैं गीतमा गरिबीको कारणले बिदेसिनु परेका नेपाली हरुको कथा ब्यथाहरुलाई समेटिएको छ l बिष्णु भट्टराईको निर्देशन सम्पादन रहेको भिडियोमा बर्सा , राजेन्द्र र नाबिनको अभिनय रहेको छ , अविरल फिल्मस्ले बजार ब्यबस्थापन गरेको भिडियो हेर्नको लागि तलको लिंक मा क्लिक गर्नुहोस